नेपल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसाललाई भेट - newslinesnepal
नेपल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसाललाई भेट
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०४:१६
काठमाडौं–नेपल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसाललाई भेट गरेका छन । सोमबार महानिर्देशक भुसालकै कार्यकक्षमा भएको भेटमा व्यवसायीले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिर्दै आफ्ना गुनासाहरु पनि राखेका थिए । सो अवसरमा भुसालले गलत कार्य गर्ने र गराउने दुबैलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नछाड्ने बताउँदै व्यवसायीलाई कानूनभित्रै रहेर व्यवसाय गर्न आग्रह गरे ।
भेटघाटामा संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले पनि नितिगत समस्याहरुलगायत बिभिन्न बेथितिहरुको समाधनका साथै कार्यकाल पहिलो भन्दा राम्रो रहोस भनेर छोटो र समय सान्दर्भिक विषयहरु महानिर्देशक सामु प्रस्टयाएका थिए । भेटमा संघबाट रोहन गुरुङ (अध्यक्ष), नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघ, प्रेम कटुवाल, पूर्व अध्यक्ष बैरो संघलगायत संघका पदाधिकारीहरु र मेनपावर व्यवसायीहरुसमेत सहभागी भएका थिए ।
बिभागको महानिर्देशकमा भुसालले अघिल्लो हप्तादेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन । भुषालले विदेशमा रहेका करिब ४३ लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको पीडा सुन्ने जिम्मेवारी आइपरेको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका तथा दुख पाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको दुखमा मलहमपट्टी लगाउन आफु र आफ्नो टीमले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै पदबहाली गरेका थिए । यद्यपि सीमित जनशक्ति तथा स्रोतसाधनले बाँधिएको हुँदा यहाँहरुले अपेक्षा गरेजस्तो चमत्कारै गर्न सकिने अवस्था चाहीं छैन । तथापि हाम्रो सम्पूर्ण मन वचन र कर्म यहाँहरुको सेवामा लाग्नेछ । यस विभागमा मैले विकासका काम देखाउन सक्ने होइन । हिजोको भन्दा भिन्न चुनौती मेरा सामु छ’, भुषालले पदबहालीसँगै भनेका थिए ।
नवनियुक्त महानिर्देशक डा. भुषालले विभागको सेवा प्रवाहमा सुधारका उपायहरुबारे आाफुलाई मेसेन्जरमा वा अन्य सञ्चारका माध्यमबाटसबैले सुझाव दिनसकिने बताएका छन । यसतै भुसालले व्यवायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै पदबहाली कार्यक्रममै ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मित्रहरु ! यहाँहरुको पेशागत मर्यादा र संस्थागत छवि सुधार गर्नका लागि यहाँहरुले विगतका गल्ती नदोहोराउनु होला । वैदेशिक रोजगारलाई मर्या्दित पेशा र वैदेशिक रोजगार विभागलाई सम्मानित र गौरवमय संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न हातेमालौ गरौं’, भन्दै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुलाई चेतावनीको भाषामा आग्रह गरेका थिए । नवनियुक्त महानिर्देशक भुसाल भुकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत रहेका थिए । तत्कालीन महानिर्देशक चापागाई अवकाश अघि नै विदा जाने भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने रस्साकस्सीबीच मन्त्री गोकर्णराज विष्टको आग्रहमा भुसाललाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा विभिन्न समस्या र अहिलेको तनावपूर्ण अवस्थामा डा भुषालले विभागको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा छ । डा भुषालका अघि बिदेश जाने कामदारलाई चुस्त–दुरुस्त सेवा,पीडितलाई न्याय, व्यवसायीहरुसँग संयोजनकारी भूमिका तथा मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छन् ।